Mozilla yakatoburitsa sevhisi yeMDN Plus uye shanduro yeFirefox 98.0.2 | Linux Addicts
Mozilla yakatoburitsa sevhisi yeMDN Plus uye shanduro yeFirefox 98.0.2
Mozilla yakaburitswa kuburikidza nechiziviso kutangwa kwebasa rayo idzva rekubhadhara, mdn plus iyo inozadzisa zvirongwa zvekutengesa zvakaita seMozilla VPN uye Firefox Relay Premium.
MDN main archive Icharamba, sepakutanga, yakasununguka. Pakati pezvinhu zveMDN Plus, kugadziridzwa kwebasa nezvinhu uye kupihwa kwezvishandiso zvekushanda nezvinyorwa zvisiri pamhepo zvinomira pachena.
Pakati pemikana ine chekuita ne personalization, simbisa kuchinjirwa kwesaiti dhizaini kune zvaunofarira, kusikwa kwezviunganidzo zvine muunganidzwa wega wezvinyorwa uye mukana wekunyorera kune zviziviso nezve shanduko muAPI, CSS uye zvinyorwa zvekufarira. Kuti uwane ruzivo pasina network network a PWA application inokurudzirwa (Progressive Web Application) iyo inokutendera kuti uchengetedze faira rezvinyorwa pane yepakati svikiro uye nguva nenguva uchiwiriranisa chimiro chayo.
Mutengo wekunyorera madhora mashanu / mwedzi kana madhora makumi mashanu / gore pasuru yekutanga uye $ 5/50 yepakeji ine mhinduro yakananga kubva kuchikwata cheMDN uye nekutanga kuwana kune zvitsva zvesaiti maficha.
Parizvino, MDN Plus inongowanikwa kune vashandisi ve USA neCanada. Mune ramangwana, zvakarongwa kupa basa muUnited Kingdom, Germany, Austria, Switzerland, France, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, New Zealand neSingapore.
Si Iwe unofarira kudzidza zvakawanda nezvazvo?, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Izvo zvakakoshawo kucherechedza kuti kwemazuva akati wandei ikozvino gadziriso yeFirefox 98.0.2 iripo iyo inogadzirisa akati wandei:
Nyaya dzakagadziriswa dzakonzera kuti Linux neMacOS dzisawirirane nemamwe maplugins anoshandisa browser.pkcs11 API.
Yakagadzirisa shanduko yekudzoreredza mubato wenhoroondo weseshini yakakonzera kuparara pakuedza kurodha mamwe masaiti uchishandisa iframes (iyo iframe yemukati yanga ichiiswa kubva munhoroondo yesesheni kunyangwe imwe block yaive yakamirira kurodha).
Isu takagadzirisa nyaya iyo macOS yakatadza kunyora mukero bar mushure mekuvhura tebhu nyowani nekudzvanya Cmd + Enter.
Yakagadzirisa tsikidzi yakakonzera kuti Windows iparare nekuda kwekupererwa nendangariro dziripo.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani yekururamisa vhezheni, unogona kubvunza ruzivo mu inotevera chinongedzo.
Kana vari avo vanosarudza kushandiswa kweSnap mapakeji, vanogona kuisa iyo nyowani yekururamisa vhezheni yebrowser nekuvhura terminal uye nekunyora murairo unotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla yakatoburitsa sevhisi yeMDN Plus uye shanduro yeFirefox 98.0.2
WINE 7.5 inosvika ine ALSA mutyairi akashandurwa kuita PE uye panguva ino isingasviki mazana mana shanduko.
Parrot 5.0 inosvika nemidziyo mitsva yakawanda, asi inosarudza MATE sedesktop uye hapasisina KDE vhezheni.